ချစ်စရာကောင်းတဲ့ မွေးနေ့ရှင်လေး အဖြစ်တွေ့ခဲ့ရတဲ့ ဧငြိမ်းဖြူ
ချစ်စရာကောင်းတဲ့ မွေးနေ့ရှင်လေးဖြစ်ခဲ့တဲ့ ဧငြိမ်းဖြူ
25 Apr 2018 . 2:50 PM
အဆိုတော် ရဲရင့်အောင်ရဲ့ ချစ်သူ မင်းသမီးလေး ဧငြိမ်းဖြူ မွေးနေ့မှာ လှူဒါန်းခဲ့တာတွေနဲ့ပတ်သတ်ပြီး သူမရဲ့လူမှုကွန်ရက်မှာ အခုလိုတင်ထားတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ဧငြိမ်းဖြူနဲ့ ရဲရင့်အောင်တို့နှစ်ယောက် မွေးနေ့မှာ စိတ်ဆိုးနေကြပုံလေးတွေ ကလည်း လူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာ တွေ့ရတာဟာ စိတ်ကောက်နေကြပေမယ့်လို့ လိုက်ဖက်ပြီး အင်မတန်ကို ချစ်စရာကောင်းလှပါတယ်။
ချစ်သူနဲ့စိတ်ဆိုးနေပေမယ့် ကိတ်မုန့်ခွံ့ကျွေးလိုက်တဲ့ ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ မင်းသမီးလေး ဧငြိမ်းဖြူ
ချစ်သူဖြစ်တဲ့ ရဲရင့်အောင်က မွေးနေ့သီချင်းကို လိုက်မဆိုလို့ လက်ခုပ်တီးပြီး ဆိုဖို့ သတိပေးလိုက်တဲ့ ဧငြိမ်းဖြူက ဧပြီ လ ၂၄ ရက်နေ့မှာ အသက် ၂၂နှစ်ပြည့်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ မွေးနေ့ကို အောင်မြင်စွာပြုလုပ်နိုင်ခဲ့တဲ့ အတွက် ကျေးဇူးတင်သင့်တဲ့ သူတွေကို အခုလိုကျေးဇူးတင်ခဲ့ပါသေးတယ်။
“ယနေ့မွေးနေ့မင်္ဂလာ ✨ 💛
တကယ်မမေ့နိုင်တဲ့ နေ့လေးပါ …
သန်လျင် “သဘာဝတရားရိပ်သာ” မှာ အဘိုးအဘွားတွေ .. မိဘမဲ့ကလေးတွေ .. စိတ်ဝေဒနာရှင်တွေ .. ခိုလုံရာမဲ့သူတွေ အယောက်ပေါင်း “3100” ကျော်ကို ကိုယ့်ဝင်ငွေလေးနဲ့ လှူဒါန်းခွင့်ရတာ အရမ်းပီတိဖြစ်မိပါတယ် .. ပရဟိတလဲလုပ်ခဲ့ပါတယ် ….
ဝိုင်းဝန်းလိုက်ပါ ကူညီပေးကြသော ချစ်ရသောသူများနှင့် QueenieA လေးတွေကိုလဲ ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် … 💛
ပုံလှလှလေးတွေကို ရိုက်ပေးထားကတော့ Ko Nay Min Tun ပါ… ကျေးဇူးပါ ..
အဓိကကျေးဇူးရှင်တွေကတော့ မွေးထုတ်ပေးခဲ့တဲ့ အဖေနဲ့အမေပါ .. တစ်သက်လုံး ကျေးဇူးဆပ်လို့မကုန်ပါဘူး .. 💛 💛 ”
Photo Credit: A Nyein Phyu Facebook (Amazing Grace)
ခဈြစရာကောငျးတဲ့ မှေးနရှေ့ငျလေးဖွဈခဲ့တဲ့ ဧငွိမျးဖွူ
အဆိုတျော ရဲရငျ့အောငျရဲ့ ခဈြသူ မငျးသမီးလေး ဧငွိမျးဖွူ မှေးနမှေ့ာ လှူဒါနျးခဲ့တာတှနေဲ့ပတျသတျပွီး သူမရဲ့လူမှုကှနျရကျမှာ အခုလိုတငျထားတာကိုတှရေ့ပါတယျ။ ဧငွိမျးဖွူနဲ့ ရဲရငျ့အောငျတို့နှဈယောကျ မှေးနမှေ့ာ စိတျဆိုးနကွေပုံလေးတှေ ကလညျး လူမှုကှနျရကျပျေါမှာ တှရေ့တာဟာစိတျကောကျနကွေပမေယျ့လို့ လိုကျဖကျပွီး အငျမတနျကို ခဈြစရာကောငျးလှပါတယျ။
ခဈြသူနဲ့စိတျဆိုးနပေမေယျ့ ကိတျမုနျ့ခှံ့ကြှေးလိုကျတဲ့ ခဈြဖို့ကောငျးတဲ့ မငျးသမီးလေး ဧငွိမျးဖွူ
ခဈြသူဖွဈတဲ့ ရဲရငျ့အောငျက မှေးနသေီ့ခငျြးကို လိုကျမဆိုလို့ လကျခုပျတီးပွီး ဆိုဖို့ သတိပေးလိုကျတဲ့ ဧငွိမျးဖွူက ဧပွီ လ ၂၄ ရကျနမှေ့ာအသကျ ၂၂ နှဈပွညျ့ခဲ့တာဖွဈပါတယျ။ မှေးနကေို့ အောငျမွငျစှာပွုလုပျနိုငျခဲ့တဲ့ အတှကျ ကြေးဇူးတငျသငျ့တဲ့ သူတှကေို အခုလိုကြေးဇူးတငျခဲ့ပါသေးတယျ။
“ယနမှေ့ေးနမေ့င်ျဂလာ ✨ 💛
တကယျမမနေို့ငျတဲ့ နလေ့ေးပါ …
သနျလငျြ “သဘာဝတရားရိပျသာ” မှာ အဘိုးအဘှားတှေ .. မိဘမဲ့ကလေးတှေ .. စိတျဝဒေနာရှငျတှေ .. ခိုလုံရာမဲ့သူတှေ အယောကျပေါငျး “3100” ကြျောကို ကိုယျ့ဝငျငှလေေးနဲ့ လှူဒါနျးခှငျ့ရတာ အရမျးပီတိဖွဈမိပါတယျ .. ပရဟိတလဲလုပျခဲ့ပါတယျ ….
ဝိုငျးဝနျးလိုကျပါ ကူညီပေးကွသော ခဈြရသောသူမြားနှငျ့ QueenieA လေးတှကေိုလဲ ကြေးဇူးအမြားကွီးတငျပါတယျ … 💛
ပုံလှလှလေးတှကေို ရိုကျပေးထားကတော့ Ko Nay Min Tun ပါ… ကြေးဇူးပါ ..
အဓိကကြေးဇူးရှငျတှကေတော့ မှေးထုတျပေးခဲ့တဲ့ အဖနေဲ့အမပေါ .. တဈသကျလုံး ကြေးဇူးဆပျလို့မကုနျပါဘူး .. 💛 💛 ”